Qiimaha Suuqgeynta Shakhsi ahaaneed ee Ecommerce | BehMaster
Bogga ugu weyn/E-commerce/Qiimaha Suuqgeynta Shakhsi ahaaneed ee Ecommerce
Qiimaha Suuqgeynta Shakhsi ahaaneed ee Ecommerce
Barnaamij suuqgeyn shaqsiyeysan oo si wanaagsan loo fuliyay ayaa laga yaabaa inuu u ekaado sheeko qof-ka-qof ah sida kuwa wax iibsanaya uu kala kulmi karo dukaanka tafaariiqda leben-iyo-hoobiye.
Way fududahay in la aqoonsado waayo-aragnimada macmiilka ee wanaagsan marka aad haysato.
Bal qiyaas in aad booqatay boutique-jikada oo heer sare ah oo ku yaal aag wax laga iibsado. Xiriiriyaha wax weyddiinta ee dukaanka ku jira wuxuu kaa caawinayaa inaad doorato mashiinka espresso, wuxuu kugula talinayaa digirta espresso, wuxuuna ku siinayaa talooyin ku saabsan sida iyo goorta loo nadiifiyo oo loo dayactiro mashiinka.
Kadib, usbuuc ka dib, markaad ku soo noqoto dukaanka, saaxiibka ayaa ku aqoonsanaya, ku weydiinaya mashiinka espresso iyo digirta, oo si dhab ah u muuqda inuu xiiseynayo jawaabahaaga iyo dareenkaaga.
Ficilkan fudud ee lagu xasuusan karo qofka aad tahay - badda macaamiisha lammaanuhu wuxuu arkayaa maalin kasta - waxay kaa dhigaysaa inaad dareento macmiil la qiimeeyo. Waayo-aragnimadaasi waxay kaa dhigaysaa inaad qadariso dukaanka iyo la-hawlgalayaasha. Markaa markay ku wayddiiso qoyskaaga, waxaad karinaysaa caawa, ama haddii aad waligaa isku dayday Scanpan CS+ skillet, waxay dareemeysaa wada hadal lala yeesho lataliye aad aaminsantahay, maaha sida garoon iibka.
Sida la-hawlgale oo su'aalo ku weydiiya dukaanka dhexdiisa, ganacsiyada xiisaynaya suuqgeyn gaar ah waxay u baahan yihiin inay ka fikiraan ururinta xogta wada hadal ahaan.
Suuq Gaarka ah
Dhab ahaantii, wada hadalkani waa suuqgeyn shaqsiyeed. Buug-waxbarasho ayaa ereyga u qeexaya si ka duwan. Waxay odhan lahayd suuqgeyn shakhsi ahaaneed ayaa adeegsada falanqaynta xogta iyo teknoolojiyadda dhijitaalka ah si ay u siiso macaamiisha cusub ama kuwa mustaqbalka leh fariimaha gaarka ah iyo soo jeedinta alaabta.
Si kastaba ha ahaatee, xudunta u ah, suuqgeyn gaar ah ayaa laga yaabaa inay noqoto wada hadal.
Haddi sheekadu si fiican u socon waydo, khibrada macmiilku waxay noqon kartaa mid soo jiidasho leh. Hadii aad waligaa fariin iimaylka ka heshay tafaariiqle ka bilaabma khadka "Hello %%% MAGACA KOOWAAD%%%" waxaad fahantay sida uu u dhaawacayo wada hadalka liita, isku day liidata ee suuqgeyn shaqsiyeed ayaa dareemi kara.
Kala goyntan la mid ah waxay ka dhici kartaa inta u dhaxaysa ololaha xayaysiiska iyo iimaylada wax kala iibsiga ee macaamiishu helaan ka dib iibsi. Dukaanle u soo jiitay tafaariiqle sababtoo ah ololaha xayaysiimaha dambe ee qosolka leh ayaa laga yaabaa inuu ogaado haddii ay soo baxdo in farriimaha iimaylka ee calaamaduhu yihiin kuwo aan fiicneyn.
“Waxaan tusaale u soo qaadanayaa mid ka mid ah macaamiisheena; [waa] Degenaansho, app-ka meditation, "ayuu yidhi Garin Hobbs, oo ah maamulaha istaraatiijiyadda heshiiska ee Iterable, taas oo ka dhigaysa suuq-geynta koritaanka.
"Suuqgeeyayaasha abka badankoodu waxay u janjeeraan inay u kala qaybiyaan dhagaystayaashooda, malaha, meelo cadaalad ah: kuwa bilaashka u isticmaala; kuwa arkay qiimaha lagu bixinayo khidmadaha,” ayuu yiri Hobbs, isaga oo intaa ku daray in tani aysan ku filneyn. Heerarka ka-qaybgalka degenaanshaha ayaa aad hoos ugu dhacay xitaa ka dib markii macaamiishu ay bixiyeen kharashka is-diiwaangelinta. Macaamiisha waxaa lagu soo jiitay xasillooni ololaheeda xayaysiiska laakiin ka dib waxay la kulmeen kala go'.
"Marka aan ka fikirno waxa dadka u soo jiidi kara app meditation, sida Calm. Waxaad u malaynaysaa in ka-fiirsashadu tahay qiimo la wadaago. Laakiin sababo kala duwan ayaa mid kasta oo naga mid ah u soo jiidaya.
"Hal qof ayaa laga yaabaa inuu sameeyo si uu u yareeyo walbahaarka ama si loo yareeyo walaaca. Mid kale ayaa laga yaabaa inuu sameeyo si uu u helo fursad uu kaga baxo oo uu furo shan daqiiqo oo keliya maalin kasta. Waa in la helo nabaddaas gudaha ah iyo fursadda aad dib ugu soo laaban karto xarunta. Taasi aad ayey uga duwan tahay walbahaarka ama welwelka. Qofka saddexaad - sida qof maskax-ciyaar leh oo qabta tababbar jireed oo badan - sababtoo ah dhinaca tababarka maskaxda. Qof ayaa laga yaabaa inuu u yimaado inuu horumariyo dhaqankan cusub ee caado garaadka. Markaa waxa jiri kara qof qaadanaya hab-nololeed cusub oo cusub, sabab kasta ha ahaatee, waxa uu dareemayaa in ka-fiirsashadu ay qayb ka tahay taas. Ugu dambayntii, waxa laga yaabaa in aanu haysano qof raadinaya habab lagu dareemo qanac iyo nasasho badan laakiin waxa laga yaabaa in aanu dareemo in ka fiirsashadu ay tahay wax yar oo qallafsan. Waxaa loogu talagalay dadka ku qariya kiristaalo agagaarka gurigooda. Runtii ma hubo inay taasi aniga ila tahay iyo in kale,” Hobbs wuu sii hadlay.
"Marka hadda waxaan haynaa lix qof oo kala duwan kuwaas oo dhammaantood lagu soo jiiday qiimaha guud ee ka fiirsashada," Hobbs wuxuu ku nuuxnuuxsaday ereyga "qiimaha" ee xigashooyinka hawada markii uu hadlayay. "Laakiin asal ahaan, waxaa jira waxyaabo aad u kala duwan oo iyaga kaxeeya halkan."
Sii oo Qaado
Waa kan caqabadda. Suuqgeeyayaasha doonaya inay aqoonsadaan waxa u kaxaynaya macmiil kasta inuu soo dukaameysto oo uu hawl galo waa inay waydiiyaan su'aalo sida saaxiibka dukaanka wax waydiinaya ee aan kor ku soo sheegnay.
Qaar ka mid ah su'aalahan ayaa laga yaabaa inay ku yimaadaan qayb ka mid ah iibka bilowga ah marka software-ka ecommerce-ka ganacsadaha uu ururiyo magaca iyo cinwaanka. Bixinta iyo qaadashada sheekadu waxay ku socon kartaa taxane soo dhawayn leh. Waxay noqon kartaa mid fudud sida weydiinta dukaameeyaha haddii ay doorbidayso farriimaha iimaylka ama qoraalka ama haddii ay doorbidi lahayd isticmaalka app ama shabakadda moobaylka.
Wada hadalkani waxa uu ku socdaa iibsi kasta oo cusub iyo is dhexgalka cusub. Waa mid dhamaystiran sababtoo ah sheekadu kuma dhacayso emaylka oo keliya balse waxa ay ka dhacaysaa mareegaha dukaanka iyo app-kiisa marka macmiilku la falgalo wakiilka adeega macaamiisha.
Marka su'aal la waydiiyo, ama la arko dabeecadda, waxay u baahan tahay in la fahmo. Haddii jawaabta macmiilku ama hab-dhaqankiisu aanay caddayn, caddee.
Waxaa jirta khatar la mid ah samaynta fikrad khaldan. Ganacsigu waxa uu keeni karaa in wada sheekadu khalkhal gasho ama , kaba sii darane , kala fogaato macmiilka.
"Haddii aan arko in qof taariikhdiisa oo dhan uu iibsanayo dharka ragga, laakiin si lama filaan ah ayaan u arkay dharka, waa maxay macnaha dharkaas?" Hobbs ayaa yidhi.
"Haddii aan isticmaalno fikradda tooska ah, waxaa laga yaabaa in aan qiyaaso in ay tahay hadiyad qof kale ama ay tahay naftooda. Waa 2020, mana soo rogi karno laadhuuga su'aalahan oo kale. Labbiskaasi wuxuu noqon karaa macmiilka, waxaadna u baahan tahay inaad si xushmad leh u weydiiso ama u ogaato - si ay macmiilku u dareemaan ammaan, taas oo ka dhigaysa macmiilku inuu dareemo qayb la doonayo oo ka mid ah dhegeystayaasha sumadda, laakiin sidoo kale waa in la waydiiyaa hab aad u run ah oo sax ah qiyamka summadaha,” Hobbs ayaa yidhi.
Tani waxay la macno noqon kartaa isticmaalka codaynta bogga ganacsadaha, xog-ururinta horusocodka ah ee iimaylka, ama siyaabo kale oo lagu waydiisto caddayn. Ma aha mid ka duwan sida saaxiibka dukaanka wanaagsan uu isku dayi karo inuu fahmo waxa dhabta ah ee muhiimka u ah macaamilka iyo waxa dhiirigelintiisa ama iyada.
U horseedaya Daacadnimo
"Garoonka tartanka qayb kasta oo tafaariiqda ecommerce - wanaagga, qayb kasta oo ka mid ah - waa mid aad u cufan. Intarneedku waxa uu u abuuray fursad loo siman yahay qof kasta oo fikrad leh… inuu baxo oo uu la tartamo xitaa noocyada ugu waaweyn. Macaamiishu gabi ahaanba way ku kharribeen doorashada, ayuu yidhi Hobbs.
"Ka fikir xitaa hal shay, sida jaakada puff Patagonia. Waxaan si fudud u liis gareyn karaa darsin meelood oo hadda ah halkaas oo aan ka iibsan karo jaakadaas isla qiimo isku mid ah oo aan weli helayo waxyaabo ay ka mid yihiin maraakiibta bilaashka ah ee habeenkii. Haddaba maxaa ii soo jiidi kara mid ka mid ah summada kale?”
“Jawaabta dhabta ahi waa laba laab: qiimo iyo khibrad. Labadaas sifona waa kuwo aad u saraysa. Laakiin marka aynu ka fikirno sida macaamiishu ula falgalaan summada, qiimaha iyo waayo-aragnimada inta badan waa tayada muhiimka ah. Taasi waa waxa ina soo jiidanaya. Taasi waa waxa ina haya. Way ka yar tahay caado iyo wax badan oo ku saabsan waxyaabo badan oo nafsi ah iyo waxyaabo jireed oo kala duwan kuwaas oo gala daacadnimada oo gacan ka geysta abuurista doorbid."
Dareenka shakhsiga iyo dookhiisa waxay saameeyaan aragtida shakhsi ahaaneed. Mid ka mid ah siyaabaha ugu wanaagsan ee uu ganacsatadu ku ogaan karo dareenkaas iyo dookhyadaas waa bixinta iyo qaadashada wada-hadalka macmiilka.
15 Koorsooyinka Tababarka Baraha Bulshada iyo agabka
Sida loo Sameeyo Cloudflare APO ee WordPress - Quus qoto dheer oo lagu kobcinayo waxqabadka ilaa 300%